जिसस काभ्रेको निर्वाचन असार १ गते, को बन्ला प्रमुख ? - सबैको समाचार
जिसस काभ्रेको निर्वाचन असार १ गते, को बन्ला प्रमुख ?
काभ्रे : धुलिखेल स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्य तालिका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको निर्वाचन असार १ गते हुनेछ ।
२७ गते मतदाता नामावली प्रकाशस गरिनेछ । जिल्ला समन्वय समितिका लागि नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउँछन् ।
२९ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने र मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिनेछ । ३० गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, उम्मेदवाले नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
काभ्रेमा १३ वटा स्थानीय तह छ । जसमा २६ जनाले मतदान गर्न पाउँछन् । कांग्रेससंग १३ मत रहेको छ । कांग्रेसले एक मत अन्य पार्टी पाउँदा पनि बहुमत पुग्छ ।
गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिने निर्णय यसअघि नै भएको छ । जिल्लामा नेकपा एसको एउटा मात्रै मत छ । माओवादी केन्द्रसंग ८ मत रहेको छ । नेकपा एमालेसंग ४ मत मात्रै रहेको छ ।
जिल्ला स्थित सत्ता साझेदार दलहरुबीच जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने बारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन । सम्भवतः मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले अब गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल हुनेछ ।
गठबन्धन दलमा कुरा नमिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एस मात्रै मिल्दा पनि समन्वय समितिको पुरै पदाधिकारी चयनका लागि मत पुग्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दा पनि समन्वय समिति गठनका लागि पर्याप्त मत पुग्नेछ ।
नेकपा एमाले भने यो पटक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । आफुसंग मत निकै कम भएकाले सम्भवतः एमालेले यो जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवार उठाउने छैन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि जिसस काभ्रेमा एमाले एकलौटी बहुमतमा थियो ।
काभ्रेली जनताको बदनाम हुने काम कुनै पनि हालतमा गर्दिन : मन्त्री हुमागाई
काभ्रेका एन्जलको ह त्या गर्ने तामाङ ९ वर्षपछि प क्रा उ
आजको मौसम: वर्षा र हिमपातको सम्भावना